स्याबास दैलेखी युथ! | Nagarik News - Nepal Republic Media
स्याबास दैलेखी युथ!
१७ कार्तिक २०७५ ९ मिनेट पाठ
दैलेखका तीन जना युवाको सक्रियतामा सुरु भएको खेल महोत्सवले जिल्लाभर खेलकुदको माहोल तात्तिएको छ । उनीहरूको कदम प्रेरणादायी छ।
युवाहरूको बुझाईमा समाज परिवर्तनको कठिन बाटो रोज्नुमा मुस्किल भूमिका अब्बल कलाकारलाई मात्र दिने गरिन्छ । जिन्दगीको रंगमञ्चमा अब्बल भूमिका निर्वाह गर्न सके जीवन सार्थक हुनेछ । अझै सशक्त रूपमा अघि बढ्ने उनीहरूको योजना छ । शुभकामना दैलेखी युथलाई!
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७५ ०८:३५ शनिबार